Kooxda Leicester United (UK) oo ku guuleysatay Koobka Kubadda Cagta Ciyaaraha Xagaaga Sweden
July 25, 2011 Category: Somali Sports, Sports News, Videos	Axad, 24 July 2011(HOL): Ciyaarihii Kubadda Cagta Xagaaga ee ka socda Garoonka Spånga IP ee magaalada Stockholm ayaa galabta la soo gebagebeeyay iyadoo ay ku soo dhamaatay ciyaar dhexmartay Leicester (UK) iyo Xiddigaha Rågsue (Sweden.
Ciyaartii galabta oo aad u adkeyd ayaa waxaa 90kii daqiiqo oo ay socotay waxaa ay ku soo gebagebowday 3—0, iyadoo ay koobka ku guuleysatay Kooxda Leicester (UK), waxayna seddexda gool kala ahaayeen labo gool oo caadi ah iyo gool-ku-laad ama rigoore.
Ciyaarta ayaa markii ay dhammaatay waxaa loo qabtay munaasabad abaal-marinno iyo Koob lagu guddoonsiinayay ciyaartoyda Kooxda Leicester (UK), iyadoo sidoo kalena abaal-marinno la siiyay shakhsiyaad iyo Booliska Magaalada Stockholm oo gacan weyn ka geystay qabsoomidda iyo hab-sami-u-socodka Tartankii Kubadda Cagta ciyaaraha xagaaga Sweden oo uu sanad walba soo qaban qaabiyay Ururka SEUKI.
Munaasabadda xiritaanka ciyaaraha ayaa waxaa ka hadlay Guddoomiyaha xiligan ee SEUKI Wali Maalin Shaaciye, wuxuuna u mahadceliyay intii gacanta ka geystay qabsoomidda ciyaaraha SEUKI, si gaar ahna wuxuu u xusay Xawaaladaha, Booliska Magaalada Stockholm, Saxaafadda iyo dadweynaha maalin walba u soo daawasho tegi jiray.
Wali Maalin wuxuu intaas ku daray in uu si aad ah ugu faraxsan yahay in ay ciyaaraha soo gebageboobaan, ayna si habsami ah ku dhamaadaan, isagoo si gaar ah mahadcelin ugu jeediyay Booliska Magaalada Stockholm oo intii ay ciyaaraha socdeen ammaanka si aad ah u adkeeyay.
Guddoomiye ku xigeenka SKIF Abuukar Cabdulle Dhabaareey ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda, wuxuuna sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu hadal u jeediyo dadkii ka soo xaadiray ciyaartii kama dambeysta ahayd, wuxuuse caddeeyay in uu aad u jeclaan lahaa in dadkii uu la hadlayay uu kula hadlayo Soomaaliya oo aan ahayn sida ay hadda tahay.
Abuukar Dhabareey waxaa uu intaas ku daray in Sweden, gaar ahaan Magaalada Stockholm ay tahay hooyada Isboortiga, taasina waxaa keentay buu yiri dadka ku nool Sweden oo aad u jecel, una dhiirigeliyo Isboortiga.
Kerstin Gustavsson oo ka tirsan Xisbiga haya talada dalka Sweden oo sanad kasta goob-joog u ah ciyaaraha xagaaga Sweden ayaa munaasabadda ka hadashay, waxayna sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay in ay mar kale goob-joog u ahaato Ciyaaraha xagaaga Kubadda Cagta Sweden oo gebo-gebo ah. Kerstin waxay u hambalyeysay kooxdii koobka ku guuleysatay ee Leicester.
Sidoo kale waxaa ka hadlay munaasabadda mas’uuliyiin ka socday Shirkadaha Xawaaladaha Dahabshiil, Sahal iyo Qaran, waxayna dhammaantood ka hadleen abaaraha ka jira dalka Soomaaliya, iyagoo dadka ugu baaqay in ay gargaar u fidiyaan dadka ku dhibaateysan Soomaaliya.
Intaas kaddib waxaa abaalmarinno la guddoonsiiyay Koox la timid ciyaar wanaag intii tartanka socday, taasi oo loo gartay Olympic Amaga oo Denmark ka socotay, waxaana abaalmarintaas bixiyay Booliska Magaalada Stockholm. Sidoo kale waxaa abaal-marinno la siiyay difaacii ugu fiicnaa ee tartanka ka qeybgalay, kaasi oo loo gartay Hagi oo ka tirsan Kooxda Xiddigaha Rågsue (Sweden). Waxaa kale oo jiray kooxo kale oo abaal-marinno la siiyay, kuwaasi oo siyaabo kala duwan ugu guuleystay abaalmarinnada. Bahda Saxaafadda ayaa sidoo kale billado lagu abaal-mariyay.
Dhanka kale, waxaa xusid mudneyd in galabta ay ka dhacday Garoonka Spånga IP ee magaalada Stockholm ciyaar lagu xusayay halyeygii Isboortiga Soomaaliyeed marxuum Nuur Xuseen Cabdi (Nuur Jeenyo), taasi oo dhexmartay Kooxaha Horseed iyo Nabadda oo UK ka socday, waxaana koob labada koox loo dhigay ku guuleysatay Kooxda Horseed.
Ciyaaraha SEUKI oo soo bilowday sanadkii 2007 ayaa waxaa la qabtay sanadkii 5aad, waxaana intii la qabanayay ka soo baxayay dhalinyaro leh tayo dhinaca ciyaarta Kubadda Cagta ah, kuwaasi oo qaarkood ay nasiib u heleen in ay ka mid noqdaan Kooxaha heerka koowaad ee dalalka Yurub, gaar ahaan kooxaha UK.
13 Kooxood oo tartankan ka qeybgalay iyo kaalimihii ay ku soo kala baxeen:
Leicester (UK) Kaalinta 1aad
Xiddigaha Rågsue (Sweden) Kaalinta 2aad
Qaran (Sweden) Kaalinta 3aad
Finland Kaalinta 4aad
Dahabshiil (Norway) Kaalinta 5aad
Wadani (Denmark) Kaalinta 6aad
Australia Kaalinta 7aad
Olympic Amaga (Denmark) Kaalinta 8aad
Nabadda (UK) Kaalinta 9aad
Switzerland Kaalinta 10aad
Stevenger (Norway) Kaalinta 11aad
Horseed (UK) Kaalinta 12aad
Ilamos Kaalinta 13aad
ABDIQANI SICIID CARAB OO HOTELKII UU DEGNAA LAGU XIRAY KA DIB MARKII LACAGTII AY KU JIIFEEN LAGA DHIIBI WAAYEY!